Hoy ny fanadihadiana ... | Media sosialy kely orinasa
Hoy ny fanadihadiana….
Alahady, Jona 12, 2011 Talata, Oktobra 4, 2011 Lorraine Ball
Ny firesahana amin'ireo tompona orinasa kely momba ny haino aman-jery sosialy dia toa mitombo ny fahalianana amin'ny mpanelanelana amin'ny serasera rehefa manomboka mamindra ny hetsika marketing izy ireo amin'ny media sosialy mahazatra.
Ny valim-pifidianana vonjimaika nataontsika tamin'ny fanadihadiana momba ny haino aman-jery sosialy dia toa manondro tompona orinasa, samy mandany fotoana betsaka amin'ny media sosialy isan'andro ny lehilahy sy ny vehivavy. (Lehilahy mandany bebe kokoa noho izany ny vehivavy). Fiovana goavana io tamin'ny vao herintaona lasa izay, raha nanao ny fianarantsika voalohany.
Ny tsipika mena sy volontany dia hita taratra amin'ny valiny tamin'ny fandinihana 2010. Araka ny hitanao, ny antsasaky ny lehilahy sy ny vehivavy namaly ny sisanay dia nilaza fa nandany 30 minitra isan'andro tao amin'ny media sosialy. Amin'ity taona ity, ny tsipika manga sy teal dia manondro mazava ny fiovan'ny fotoana bebe kokoa amin'ny tambajotra sosialy. Miaraka amin'ny 50% amin'ireo lehilahy manao tatitra fa mandany adiny iray isan'andro izy ireo
Na dia mahaliana aza, ny tena fanontaniana: Miasa ve? Ny data dia toa manondro fa izany no izy. Na dia mihoatra ny antsasaky ny tompona orinasa amin'ny fandalinana amin'ity taona ity aza dia mbola manondro kaonty amin'ny tambajotra sosialy latsaky ny 5% amin'ny totalin'ny varotra azy ireo, dia misy orinasa mazava fa miaina fahombiazana.
Inona no ataon'izy ireo hiteraka varotra? Tsy maintsy miandry ny angon-drakitra sisa tavela ianao vao hahalala.
Ary mandritra izany fotoana izany, raha tsy nanana fotoana hirotsahana ianao dia fotoana mety izao, minitra vitsy ihany ny fanadihadiana, ary vao mainka mahaliana ny valiny ny valinteny. Raha mahavita ny fanadihadiana ianao dia handefasako ny kopian'ny taratasy fotsy vaovao rehefa avoaka izy.
Raiso izao ny fanadihadiana
Ary raha mila kopian'ny taratasy fotsy ianao tamin'ny fandinihana ny taona lasa, ho hitanao eto izany:
13 Jun 2011 amin'ny 2:54 AM
Ny fanadihadiana toy izao dia tena ilaina sy manampy ary afaka mandray anjara na iza na iza satria ny haino aman-jery sosialy na aiza na aiza sy ny olon-drehetra. Fa avy eo, efa nitsidika tranonkala mifandraika aho izay namintina ny tatitra statistikan'ny lehilahy sy vehivavy mampiasa media sosialy ary ny vokany dia mandany fotoana betsaka kokoa noho ny lehilahy ny ankamaroan'ny vehivavy. Na izany aza, raha tadidiko dia niresaka momba ny akany hafa izy fa tsy momba ny tanjona ara-barotra amin'ny raharaham-barotra toy ity. Misaotra amin'ny vaovao.